>FUND RAISING FOOD FESTIVAL FOR THUKHA ALIN (Eye Clinic) THUKHA CHARITY CLINIC & FREE FUNERAL SERVICES | MoeMaKa Burmese News & Media
>Khaing Mar Kyaw Zaw - Burmese Lives at the Borders - 16
ကာတွန်း စောငို - လွှတ်တော်အသံ ပွက်ပွက်ညံ
>FUND RAISING FOOD FESTIVAL FOR THUKHA ALIN (Eye Clinic) THUKHA CHARITY CLINIC & FREE FUNERAL SERVICES
သုခအလင်း မျက်စိဆေးခန်း နှင့် သုခအလင်းစာကြည့်တိုက် ရန်ပုံငွေ ဈေးပွဲတော်ဖိတ်စာ
(ရွာဆော်ကြီးက တဆင့် ဝေမျှပါတယ်)
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဦးကျော်သူ၏ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကတည်းက စ၍ တည်ထောင်လာခဲ့သော “နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၊ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း၊ သုခအလင်းစာကြည့်တိုက်” အစရှိသော လူမျိုးဘာသာ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး၊ ခုနှစ်ရက်သားသမီးတို့အား အခမဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုကို အားပေးကူညီရန် မင်္ဂလသုခကျောင်းမှ မုန့်ဟင်းခါး၊ အကြော်စုံ၊ အသုပ်စုံ၊ မြန်မာ့ရိုးရာ အချိုမုန့်မျိုးစုံ ရောင်းချ၍ ရရှိသည့် ရံပုံငွေများကို တိုက်ရိုက်လှုဒါန်းမည်။
နေ့ရက် – 20/03/2011 8:00 am – 2:00 pm နေရာ – မင်္ဂလသုခကျောင်း 76 Templeton Crescent, Girrawheen ဖုန်း – 63643886 ကားများကို NEW PARK Shopping Centre တွင်ရပ်ထားပေးကြပါရန်။
FUND RAISING FOOD FESTIVAL FOR THUKHA ALIN (Eye Clinic) THUKHA CHARITY CLINIC & FREE FUNERAL SERVICES
The above services are provided to the communities in Burma, free with loving care, kindness, empathy, willingness and selflessness under the leadership of U Kyaw Thu, Citizen of Burma for the year 2010.
A variety of food will be on sale and all proceeds will be donated.
DATE: 20 MARCH 2011 (SUNDAY)
TIME: 8 am till2pm
PLACE: MINGALA THUKHA VIHARA
76 TEMPLETON CRESCENT,GIRRAWHEEN
PARK AT NEWPARK SHOPPING CENTRE